ညီအကိုစိတ်ထားရှိပါ ........... Rev. မာနော် ~ The Light of Truth
ညီအကိုစိတ်ထားရှိပါ ........... Rev. မာနော်
Monday, March 14, 2011 The Light Of Truth No comments
(သုတ္တံ ၁၅း၃၄) ထာဝရဘုရား၏ မျက်စိတော်သည် ခပ်သိမ်းသော အရပ်၌ရှိ၍ ကောင်းမကောင်းကို ကြည့်ရှုတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်သည် မြင်တော်မူသောသူဖြစ်၍ ယနေ့ မြေကြီးပေါ်တွင် ဖြစ်ပျက်သမျှတို့ကို ရှုမြင်သိမှတ်တော် မူပါ သည်။ ယုံကြည်သူများသည်လည်း ဘုရားသခင်၏ မြင်တတ်သော မျက်မှောက်တော်၌ အသက် ရှင် လျက်သွား လာကျင်လည်နေရကြောင်း အထူးသတိပြုရန် လိုပါသည်။ ယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်၏ မြင်တတ်သော မျက်မြင်အောက်၌ ရှိနေစေကာမူ ခရစ်ယာန်အသက်တာ အသက်ရှင်ရာတွင် အမှတ်တမဲ့ ပေါ့ပေါ့ဆဆ အလေးအနက် မထားဘဲ သမ္မာသတိ ကင်းမဲ့စွာ အသက်ရှင် နေကြပါသည်။ ဘုရား ရှေ့တော်၌ လူမျိုးစွဲ၊ ဂိုဏ်းဂဏစွဲ၊ ဆရာစွဲထားကာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မိတ်သဟာယ ပျက်ပြားပြီး မနာလိုခြင်း၊ မုန်းတီးခြင်း၊ ငြူစူစိတ် ထားခြင်းဖြင့် ခေါ်ပြော ဆက်ဆံပေါင်းသင်း မိတ်သဟာယဖွဲ့ရန်ပင် ခက် ခဲလှပါသည်။ စာတန် မာရ်နတ်၏ လက်တစ်လုံးခြား လှည့်ဖြားမှုကို ခံရကာ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ကြီးမား သော အမှားဖြင့် အသရေ ပျက်ပြားနေကြပြီး ယော ၁၅း၁၂ တွင် ယေရှုက အချင်းချင်း ချစ်ကြပါဟု မိန့်မှာထားသည်ကို အလေးမထားကြပေ။ ဗာဗုလုန် တန်ခိုးအာဏာ ကျဆုံးပြီးနောက် မေဒိပေရသိ ရှင်ဘုရင် အာတဇေရစ်မင်း စိုးစံသော အချိန်တွင် နေဟမိသည် ရှင်ဘုရင် ဖလားတော်ကို ကိုင်၍ ဆက်သရသောသူဖြစ်သည်။ နေဟမိသည် ဘုရားသခင်ရှေ့ လူရှေ့၌ မျက်နှာရသော သူဖြစ်၏ ။ စစ်သူရဲလည်း မဟုတ်ပါ။ ၀န်ကြီးလည်း မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် သူ၏ နှလုံးသား မှန်ကန်မှု အပေါ် ဘုရားသခင်သည် အသုံးပြု ချီးမြှောက်ခဲ့ပြီး သမ္မာကျမ်းစာတွင် အထင်တရ ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် မှတ်တမ်းတင် ထားပါသည်။ နေဟမိ ရှုရှန်နန်းတော်၌ ရှိစဉ်တွင် ယေရုရှလင်မြို့မှ ရောက်လာသော သူများထံမှ မိမိလူမျိုး မိမိညီအစ်ကိုများ တွေ့ကြုံသော အခြေအနေ မြို့ရိုးပြိုပျက်ခြင်းတို့ကို ကြားသိရ၍ စိတ်ပူပန်ခြင်း ဂရုဏာနှင့် ကူညီဖြေရှင်းရန် ပြင်းပြသော သူ၏ဆန္ဒကြောင့် မိမိလုပ်ပိုင်ခွင့် ရပိုင်ခွင့်အပေါ် အခွင့်အရေး မယူဘဲ၊ ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်း အပ်နှံခြင်းဖြင့် အဖြေရှာခဲ့ပါသည်။ နေဟမိသည် အခွင့်အရေး ယူတတ်သော သူမဟုတ်ပါ။ သူသည် ဘုရားသခင်၏လူ၊ ဆုတောင်းခြင်း၌ မွေ့လျော်သောသူ၊ ယနေ့တွင် ညီအစ်ကိုများ တွေ့ကြုံနေရသော ခက်ခဲမှု ဆင်းရဲခြင်း၊ ကြည်တည်းသောပြဿနာ အားနည်းမှုကို စိတ်ပူပန်ခြင်းဖြင့် ကူညီဖြေရှင်းပေးလိုသော
စေတနာစိတ်ဖြင့် ကူညီဖြေရှင်းခြင်း၊ မ,စကျေးဇူးပြုသော သူတွေရှိသကဲ့သို့ ညီအစ်ကို အရေးကို အလေးမထား ဥပက္ခာပြုသူများလည်း ရှိ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း အခက်အခဲ အကျဉ်းအကြပ်၌ ရှိသော ညီအစ်ကို များကို ငွေကြေးအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဆုတောင်းပေးခြင်း၊ နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ဝေငှတည်
ဆောက်ပေးဖို့ လိုအပ်လေသည်။ နေဟမိသည် ထိုအမှုအရာအတွက် လေးလတိုင်တိုင် ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် အပ်နှံခဲ့ရာ ဘုရားသခင် အဖြေပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ယေရုရှလင်သို့ သွား၍ မြို့ရိုးကို ဘုရားသခင်အား
ဖြင့် (၅၂) ရက်အတွင်း အပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ မိမိ ညီအကိုများနှင့် အတူ ၀မ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာ ဘုရားသခင်ထံ အပ်နှံ ချီးမွမ်းကြပါသည်။ ဆုတောင်းခြင့်နှင့်အတူ အဖိုးအခပေး၍ အားကြိုးမာန်တက် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်မှု၌ အောင်မြင်ပြီးစီးခြင်းအခွင့် ဘုရားသခင် ပေးခဲ့ပါသည်။ ဒံယေလ အခန်း(၂)တွင် လည်း ဒံယေလလူငယ်တစ်ဦး၏ အသက်တာကို ဆင်ခြင်ကြည့်ကြပါစို့။ သူသည် အသက်ရှင်သော ဘုရား သခင်ကို ယုံကြည်ကိုးစားပြီး နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဆင်ခြင်၍ နှလုံးသား၌ သိုထားသောသူလည်း ဖြစ်၏ ။ ဗာ ဗုလုန် ရှင်ဘုရင် နေဗုခဒ်နေဇာမင်းသည် ယေရုရှလင်မြို့မှ ဒံယေလ၊ ရှာဒရက်၊ မေရှက်၊ အဗေဒနေဂေါစ သည့် လူငယ်များကို သူ့ထံတွင် မင်းမှုထမ်းရသော အချိန်အခါ သမယ ဖြစ်၏ ။ တစ်ချိန်က နေဗုခဒ်နေဇာ မင်းကြီး အိပ်မက်မြင်တော်မူ၍ ထိတ်လန့်ခြင်းရှိသောကြောင့် စက်တော် မခေါ်နိုင်သည်ဖြစ်၍ အိပ်မက်ကို
ပြန်ပြောစေခြင်းငှာ မာကုပညာရှိ ဗေဒင်အတတ်၊ သူပြုဆရာ။ ခါလဒဲဆရာတို့ကို ခေါ်ခြေဟု အမိန့်တော်ရှိ သည့်အတိုင်း သူတို့သည် ရောက်လာကြသည်။ ရှင်ဘုရင်က ငါသည် အိပ်မက်မြင်မက်ပြီး ထိုအိပ်မက်ကို မသိနားမလည်သည် ဖြစ်၍ မအီမသာရှိသည်ဟု မိန့်တော်မူပြီး အိပ်မက်ကို ဖော်ပြရန်နှင့် မဖော်ပြနိုင်လျှင် အပိုင်းပိုင်း စဉ်းသတ်မည်ဟု အမိန့်တော်ရှိ၏ ။ ခါလဒဲဆရာတို့ကလည်း အိပ်မက်ကို မိန့်တော်မူပါ။ အနက်ကို ဖော်ပြပါမည်ဟု လျှောက်ကြ၏ ။ ရှင်ဘုရင်သည် အိပ်မက်ကို မပြောပြဘဲ အိပ်မက်နှင့် အနက်အ ဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ပြရန် ထပ်၍ အမိန့်တော်ရှိ၏ ။ ခါလဒဲ ဆရာတို့ကလည်း မင်းကြီး၏ အိပ်မက်ကို ဖြေနိုင်မည့် သူ တစ်ယောက်မျှမရှိ၊ လူပကတိနှင့် မဆက်ဆံသော ဘုရားမှတစ်ပါး အဘယ်သူမျှ မဖော်ပြနိုင်ဟု ပြန်လျှောက်လျှင် ပြင်းစွာ အမျက်တော်ထွက်၍ ဗာဗုလုန်၌ ဒံယေလ အပါအ၀င် အရာရှိများ ကို ပယ်ရှင်း သတ်ဖြတ်ရန် အမိန့်တော်ရှိ၏ ။ ဒံယေလသည် အိပ်မက်ကို ဖြေရသော အချိန်ပေးတော်မူပါ မည့်အကြောင်း အသနားခံပြီးမှ ညီအကို ရှာဒရက်၊ မေရှက်၊ အဗေဒနေဂေါတို့နှင့် အတူ အိပ်မက်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ကို ဘုရားသခင်၏ ဂရုဏာ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဖွင့်ပေးရန် ဆုတောင်းကြလေသည်။ ယုံကြည်သူ အသက်တာမှ မိမိတွေ့ကြုံနေရသော အခက်အခဲပြဿနာများကို ဘုရားသခင်ထံ ဖွင့်ပြ ဆုတောင်းအဖြေ ရှာရန်လိုပါသည်။ (ဆာ ၃၇း၅)
ဒံယေလတို့ ယုံကြည် ကိုးစားသော ဘုရားသခင်သည် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဖြစ်၏ ။ အလုံးစုံ၏ အလုံးစုံဖြစ်တော် မူသော ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၍ သူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစား မျှော်လင့်၍ ကိုယ့်အမှုအရာ အပ်နှံသော သူတို့ကို အမြဲကူညီ စောင်မဖြေရှင်း ပေးလျက်ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ညအခါ ဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့် အိပ်မက်နှင့် အနက် အဓိပ္ပါယ်ကို ဘုရားသခင် ဖော်ပြပေးတော်မူ၏ ။ ထိုအခါ ဒံယေလသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ
ဖြင့် ဖွင့်ပြသော ရူပါရုံနှင့် ရှင်ဘုရင်၏ အိပ်မက်အတူတူ ဖြစ်မဖြစ် စစ်ဆေးခြင်းမပြုတော့ဘဲ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဘုရားသခင် တုန့်ပြန်မ,စ ကျေးဇူးပြုခြင်းများအတွက် အစဉ် ချီးမွမ်း တတ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သင်ခန်းစာ ယူနိုင်ပါသည်။ ဒံယေလသည် မင်းကြီးအား အိပ်မက် အနက်အဓိပ္ပါယ် ကို ဖွင့်ပြလေရာ၌ ရှင်ဘုရင်သည် နှစ်ထောင်းအားရမှု ရှိလှ၍ ဒံယေလကို ချီးမြှောက်လျက် ဆုလဒ်ကိုလည်း
ကောင်း၊ ၀န်ကြီးအရာ၌လည်းကောင်း၊ ဗာဗုလုန် ပညာရှိတို့ကို အုပ်စိုးရသော ၀န်အရာ၌ ခန့်ထားတော်မူခြင်း ကိုခံရ၏ ။ ထိုအခါ ညီအကို စိတ်ထားရှိသော ဒံယေလသည် သူ၏ ညီအစ်ကို (၃) ဦးကို မေ့လျော့ခြင်းမရှိဘဲ ယနေ့တွင်မူ မိမိကောင်းစားရေး အမှုကို ရှေ့ရှုကာ ညီအကိုများကို မေ့လျော့ကာ
ကျောခိုင်းသူများသည်လည်း များစွာ ရှိပါသည်။ ဒံယေလသည် ရှင်ဘုရင်ထံ သံတော်ဦးတင်သောကြောင့် မင်းကြီးသည် သူ၏ ညီအကိုများဖြစ်သည့် ရှာဒရက်၊ မေရှက်၊ အဗေဒနေဂေါ တို့ကိုလည်း ၀န်ကြီးအရာ၌ ခန့်ထားတော်မူ၏ ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း သူတစ်ပါး မကောင်းကြောင်း ပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်း ညီအကိုများ မိမိနှင့်တန်းတူ ပုခုံးခြင်း ယှဉ်လာသူဟု ထင်မှတ်ကာ မနာလို၊ မရှုစိမ့်၊ အတ္တမာန၊ ဇာတိသဘောဖြင့် ဘေးဖယ် ချန်လှပ်မထားသင့် ဘဲ အမူအရာသည်လည်း ဘုရားသခင် မျက်မြင်အောက်၌ ရှိသောကြောင့် အထူးဆင်ခြင် သင့်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဒံယေလကဲ့သို့ ညီအကိုစိတ်ထားဖြင့် လက်တွဲခေါ်ပါ။ မိတ်သဟာယဖွဲ့ပါ။ ဆုတောင်းပေးပါ။ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် တည်ဆောက်ပေးပါ။
The Westminster Confession of Faith 1646 အခန်း (၂)...
ဘုရားသခင်က မေတ္တတော်ရှင်ဘုရားဆိုရင် ဘာကြောင့် သဘာဝေ...
The Westminster Confession of Faith 1646 ( ဘာသာပြန် )